ရေပေါ်မှာ စီနင်းနိုင်တဲ့ နောက်ဆုံးပေါ် စက်ဘီးတွေအကြောင်း - Shwe Khit Online TV
HomeAmazingရေပေါ်မှာ စီနင်းနိုင်တဲ့ နောက်ဆုံးပေါ် စက်ဘီးတွေအကြောင်း
October 18, 2021 Yan Amazing 0
အခု တစ်ခါမှာတော့ ပရိသတ်ကြီးကို ပြောပြပေးချင်တဲ့ အကြောင်းအရာလေးကတော့ ရေပေါ်မှာ စီနင်းနိုင်တဲ့ နောက်ဆုံးပေါ် စက်ဘီးတွေအကြောင်းပဲ ဖြစ်ပါတယ် ။ ဘယ်လို စက်ဘီးတွေက ရေပေါ်မှာ စီးလို့ရမလဲ ဆိုတာကတော့ အောက်ကပုံလေးတွေ တစ်ပုံချင်းစီကို ကြည့်လိုက်ပါဦးနော် …. shwekhitonlinetv.com
၁ ။ Manta5
အခု ပထမဦးဆုံး ပြောပြပေးမှာကတော့ Manta5 အမည်ရှိ ရေပေါ်စီးနိုင်တဲ့ စက်ဘီး အကြောင်းပဲ ဖြစ်ပါတယ် ။ Manta5 ဟာ လျှောပြေးရေယာဉ် အမျိုးအစား စက်ဘီး ဖြစ်ပြီး မော်တာ ( ၄၀၀ ) ဝပ်အား အထိ မောင်းနှင်နိုင်ပါတယ် ။ မော်တာ အားကောင်း တာကြောင့် ရေကန် ၊ မြစ် နဲ့ သမုဒ္ဒရာ ထဲ မှာတောင် စီးနိုင်ပါတယ်တဲ့ ။ ဒီစက်ဘီးလေးဟာဆိုရင် အလျင်အမြန် မောင်းလို့ရတဲ့ ရွက်လှေတွေလိုမျိုး နည်းပညာကို အသုံးပြုပေးထားပြီး ဘက်ထရီ ကုန်သွားတဲ့အခါ သာမန် စက်ဘီးတွေလိုမျိုး ခြေနင်းကို အသုံးပြုပြီး စီးနိုင်မှာပဲ ဖြစ်ပါတယ် ။ Manta5 စက်ဘီးရဲ့ အမြန်နှုန်းကတော့ တစ်နာရီကို ( ၁၂ ) မိုင်နှုန်း ရှိပါတယ်တဲ့ ။ shwekhitonlinetv.com
၂ ။ Baycycle
Baycycle လို့ ခေါ်တဲ့ စက်ဘီးလေးကတော့ ရေကြီးနေတဲ့ အခါမှာတောင် စီးလို့ ရတဲ့ စက်ဘီး အမျိုးအစားပဲ ဖြစ်ပါတယ် ။ Baycycle စက်ဘီးဟာ pontoon အမျိုးအစားထဲမှာ ပါဝင်ပြီး မြေပြင်ပေါ်က စက်ဘီးတွေလိုမျိုး ရေပေါ်မှာ ခြေနင်းကို အသုံးပြုပြီး စီးရမှာပါ ။ နောက်တစ်ချက်က ဒီစက်ဘီးကို တီထွင်ထားသူတွေကတော့ Baycycle ကို စီးတဲ့ အချိန်အတွင်း လုံခြုံမှု ရှိစေရန် အကာကွယ် ဦးထုပ် အပြင် water wings တွေကိုပါ ဝတ်ဆင်ထားသင့်တယ်လို့ အကြံပြုထားပါတယ် ။ shwekhitonlinetv.com
၃ ။ S1-C
နောက်ထပ် ပြောပြပေးမှာကတော့ S1-C လို့ ခေါ်တဲ့ စက်ဘီးလေး အကြောင်းပဲ ဖြစ်ပါတယ် ။ ဒီ စက်ဘီးလေးကိုတော့ Schiller ကုမ္ပဏီကနေ ထုတ်လုပ်ပေးထားပြီး တန်ဖိုးကတော့ ဒေါ်လာ ( ၅၅၀၀ ) ရှိပါတယ် ။ စက်ဘီးရဲ့ ပုံစံကို ကြည့်မယ်ဆိုရင် ရေလွှာ လှိုင်းစီးတဲ့ ဘုတ် ( ၂ ) ခုကို ဆက်ထားသလို ပုံစံမျိုး ဖြစ်နေပါတယ် ။ S1-C စက်ဘီးလေးကို ခြေထောက်နဲ့ နင်းပြီး မောင်းမယ်ဆိုရင်တော့ တစ်နာရီကို (၀.၅ ) ကီလိုမီတာ နှုန်းနဲ့ သွားနိုင်မှာ ဖြစ်ပြီး မော်တာ နဲ့ မောင်းမယ်ဆိုရင်တော့ တစ်နာရီကို ( ၁၆ ) ကီလိုမီတာ အထိ အရှိန်တင်လို့ ရပါတယ်တဲ့ ။ shwekhitonlinetv.com
၄ ။ E-1
E-1 လို့ ခေါ်တဲ့ စက်ဘီးလေးကတော့ ကမ္ဘာ့ပထမဦးဆုံး ရေပေါ်လျှပ်ပြေးပြီး မောင်းနိုင်တဲ့ လျှပ်စစ် စက်ဘီး ပဲ ဖြစ်ပါတယ် ။ ဒီ စက်ဘီးလေးမှာတော့ တစ်ယောက်စီး အပြင် နှစ်ယောက်စီး စက်ဘီးကိုပါ ရွေးချယ်နိုင်မှာ ဖြစ်ပြီး တော်ရုံ တန်ရုံ ရေမငြိမ်တဲ့ အနေအထားမှာတောင် မောင်းနှင်နိုင်မှာပါ ။ သူ့ရဲ ထိပ်တန်း အမြန်နှုန်းကတော့ တစ်နာရီကို ( ၂၁ ) ကီလိုမီတာ အမြန်နှုန်း ရှိပြီး ရိုးရိုး ခြေထောက်နဲ့ ပဲ နင်းရင် ဘယ်လောက် မြန်မလဲဆိုတာကိုတော့ မပြောပြထားပါဘူး ။ ပုံစံ ဒီဇ်ိုင်းဆန်းတဲ့ ဒီ E-1 စက်ဘီးလေးရဲ့ တန်ဖိုးကတော့ ဒေါ်လာ ( ၇၄၉၀ ) ကျသင့်မှာပဲ ဖြစ်ပါတယ် ။ shwekhitonlinetv.com
၅ ။ Hydrobikes
Hydrobikes စက်ဘီးတွေမှာတော့ အမျိုးအစား သုံးမျိုးရှိပြီး Explorer ( ခြေနင်းပြီး မောင်းရတဲ့ စက်ဘီး ) ၊ Cruiser ( လျှပ်စစ် မော်တာ ပါဝါ သုံးပြီး မောင်းရတဲ့ စက်ဘီး) နဲ့ Explorer II ( နှစ်ယောက်စီး ခြေနင်း စက်ဘီး ) အမျိုးအစား တို့ပဲ ဖြစ်ပါတယ် ။ Hydrobikes တွေကို ထုတ်လုပ်တဲ့ ကုမ္ပဏီရဲ့ ပြောပြချက်အရ သူတို့ ထုတ်တဲ့ စက်ဘီးတွေမှာ နှေးတဲ့ ခြေနင်းစက်ဘီး လုံး၀ မရှိပါဘူးလို့ ပြောပြထားပါတယ် ။ Explorer စက်ဘီးတွေရဲ့ အမြန်နှုန်းဟာ တစ်နာရီကို ( ၆.၅ ) ကနေ ( ၉ ) ကီလိုမီတာ အရှိန်ရှိပြီး တန်ဖိုးကတော့ ဒေါ်လာ ( ၂၁၉၉ ) တန်ဖိုးရှိပါတယ် ။ shwekhitonlinetv.com
အခုပြောပြပေးထားတာကတော့ ရေပေါ်မှာ စီနင်းနိုင်တဲ့ နောက်ဆုံးပေါ် စက်ဘီးတွေထဲက တစ်ချို့ကို ပြောပြပေးထားတာပဲ ဖြစ်ပါတယ် ။ နောက်ပိုင်းတွေမှာလည်း အခုလိုမျိုး စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့ အကြောင်းအရာလေးတွေကို ရှာဖွေတင်ဆက်ပေးမှာမို့လို့ Shwe Khit ကို စောင့်မျှော် ဖတ်ရှုပေးကြပါဦးနော် …. shwekhitonlinetv.com